အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ Archives - Page4of 28 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ရေသောက်နည်းခြင်းနှင့် အသားအရေ ပြဿနာ
ရေသောက်နည်းခြင်းနှင့် အသားအရေ ပြဿနာ ရေအသက် တစ်မနက်လို့တောင် ဆိုရအောင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်’ရေ’ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ကြီးလှပါတယ်။ လူတိုင်းရေသောက်ပေမဲ့ တချို့က အသက်ရှင်ဖို့ လိုသလောက်ပဲသောက်တတ်ကြပါတယ်။ ရေထက် အချိုရည်တွေ ဘီယာတွေသောက်ရတာပိုကြိုက်တတ်ကြပါတယ်။ 🎯ရေသောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ?? ရေများများသောက်တဲ့အခါ ဝမ်းမှန်စေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က…
🔖ဦးရေပြားတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ပြဿနာများ🔖 ဦးရေပြားဆိုတာလည်း ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကတခြားအရေပြားတွေလို အရေပြားတစ်ခုပဲလို့ ဆိုရင်သိပ်ငြင်းစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တခြားအရေပြားတွေထက်စာရင် ပိုထူထဲတာ၊ ပိုခံနိုင်ရည်ရှိတာ၊ အပူချိန်အပြောင်းအလဲကို အနည်းငယ်ပိုခံနိုင်တာ၊ အမွှေးအမျှင်ပိုထူထဲသိပ်သည်းစွာပေါက်တာ စတဲ့ ထူးခြားမှုတွေရှိသလို ပြဿနာတွေလည်း စုံလှပါတယ်။ 🎯ဦးရေပြားမှာဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ…
🔖ခေါင်းခဏခဏလျှော်ရင် ဆံသားပျက်စီးတတ်လား🔖 ဆံပင်ဆိုတာ မျက်နှာအလှအပကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်သလို ဖုန်တွေ အမှုန်အမွှားတွေ လာကပ်ဖို့ လေထဲမှာတလွင့်လွင့်နဲ့ အဆင်သင့်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ သက်ရှိဖုန်စုပ်စက်လေးလို့ ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ တချို့မိန်းကလေးတွေကတော့ တစ်ပါတ်မှာ ဘယ်နှကြိမ် ဘယ်နေ့ဆိုရင်တော့ ခေါင်းလျှော်မယ်ဆိုတာမျိုး အမြဲ အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်လေ့ရှိပေမဲ့ တချို့ကျ…
🔖အသားအရေထိန်းသိမ်းရာတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိသောအမှားများ🔖 လူတော်တော်များများ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတိုင်းနီးပါးအတွက်တော့ အသားအရေထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုတာ မွေးရာပါတာဝန်တစ်ခုလိုပါပဲ။ မငြိုမငြင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ထမ်းဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိန်းသိမ်းနေရင်းနဲ့ ဖျက်ဆီးသလိုမဖြစ်စေဖို့တော့ မှားတတ်တဲ့ ဒီလိုအမှားလေးတွေကို သတိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ◾မျက်နှာသစ်ပြီး အချိန်အတော်ကြာအထိ ဘာမှမလိမ်းဘဲမျက်နှာပြောင်ထားခြင်း မျက်နှာသစ်ပြီးပြီးချင်းမှာ အလ်ကိုဟောလ်မပါတဲ့ Toner…
?ရေနွေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်ရင် ဆံသားပျက်စီးနိုင်လား? ခေါင်းလျှော်ခြင်းဆိုတာ လူနေမှုဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဘာရယ်မဟုတ် ခေါင်းလျှော်ရည်မရွေး ရေအေး ရေနွေးမရွေး လျှော်လိုက်ကြပေမဲ့ တချို့လူတွေမှာတော့ ဘယ်တံဆိပ်မှ ရေအေးမှ ရေနွေးမှ ဆိုတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လည်း ရွေးချယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေမှာလည်း…
?ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း? ဆံသားနှစ်ခွဖြစ်ခြင်းဆိုတာ ဆံသားပျက်စီးခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆံသားထိပ်ဖျားတွေ နှစ်ခွဖြစ်လာတတ်သလို အမွှာမွှာ ဖွာထွက်လာတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆံပင်အလှအပလည်း ထိခိုက် စိတ်တွေလည်းရှုပ်ရပြီပေါ့။ ?ဘာကြောင့် ဆံသားပျက်စီးပြီး နှစ်ခွဖြစ်ရတာလဲ ?? ◾အပူဒဏ် နေပူဒဏ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို ဆံပင်ကောက်ခြင်း…
အလှအပပေါ်ကျန်းမာရေးက ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲ အလှအပလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်နေမယ်လို့ သိတဲ့သူက နည်းပါသေးတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပဆိုတာ ခွဲလို့မရတာ အတွဲ တစ်တွဲလိုပါပဲ။ ကျန်းမာရေးလိုက်စားရင်း လှနေပနေသူတွေကို တွေ့ဇူးကြမှာပါ။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ဒီနေ့ ဒီစာလေးမှာ အလှအပနဲ့ ကျန်းမာရေးဘယ်လို သက်ဆိုင်နေလဲဆိုတာကို…